Qaabka Real Madrid Ay Kula Wareegeyso Donny Van De Beek Oo La Ogaaday
HomeWararka CiyaarahaQaabka Real Madrid ay kula Wareegeyso Donny van de Beek oo la ogaaday
November 17, 2021 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain, Suuqa kala iibsiga 0
Real Madrid ayaa lagu soo waramayaa inay u dhaqaaqeyso bisha Janaayo Xidiga kooxda Manchester United ee Donny van de Beek .
Mustaqbalka ciyaaryahanka khadka dhexe ayaa ah mowduuca la isla dhexmarayo, isagoo weli ku dhibtoonaya inuu boos joogto ah ka helo Old Trafford, iyadoo kooxo badan la sheegay inay isha ku hayaan xaaladiisa.
Newcastle United , Wolverhampton Wanderers , Everton iyo Barcelona ayaa ka mid ah kooxaha la rumeysan yahay inay xiiseynayaan saxiixa xiddiga heerka caalami ee dalka Netherlands inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga ee jiilaalka.
Si kastaba ha ahaatee, sida laga soo xigtay Fichajes , waxaa sidoo kale jira xiiso dhab ah oo ka imaanaya Real Madrid, kuwaas oo aaminsan inay awoodaan inay 24-sano jirkaan kula soo wareegaan heshiis qiimo dhimis ah Janaayo.
Warbixinta ayaa sheegeysa in Los Blancos ay u aragto Van de Beek inuu yahay bedelka mustaqbalka fog ee Luka Modric, iyadoo xiddiga reer Croatia uu soo galay marxaladihii ugu dambeeyay ee mustaqbalkiisa kooxda.
Ninka reer Holland, oo Man United kaga soo biiray Ajax Sebtember 2020, ayaa kaliya u saftay shan kulan intii lagu jiray xagaagan 2021-22.